Manao ahoana ny serivisy aorian'ny varotra?
Manome antoka 1 taona sy fanampiana ara-teknika mandritra ny fiainana izahay. Ny faritra rehetra ao amin'ny masinina dia azo soloina maimaim-poana ao anatin'ny 1 taona raha tapaka (tsy misy fihetsika diso).
Sarotra ve ny mametraka ny milina?
Ny toeram-pivarotana dia tokony hanomana fotodrafitrasa feno toy ny herinaratra sy compresseur rivotra. Ho an'ny fametrahana voalohany, ny injeniera dia halefa hametraka milina ary hanao ny fiofanana momba ny milina raha mbola torolàlana momba ny tanana. Ho an'ireo olana hafa hitranga, afaka manome torolàlana amin'ny horonantsary koa izahay.
T / T, fametrahana 50% alohan'ny filaminana, fandoavam-bola 50% alohan'ny fandefasana.
Inona ny fotoana itarihan'ny masinina?
Ho an'ireo masinina mahazatra dia afaka mandefa ao anatin'ny 30 andro isika. Raha ampanjifain'ny mpanjifa (OEM) izy dia 45-55 andro ny fotoana fitarihana.